Ny Primera Air dia manohy mampiseho fitomboana haingana rehefa miditra amin'ny tsenan'i Etazonia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Primera Air dia manohy mampiseho fitomboana haingana rehefa miditra amin'ny tsenan'i Etazonia
Oktobra 2, 2017
Nanambara ny Primera Air androany fa nandritra ny valo volana voalohany tamin'ny taona 2017, dia nitombo 16.3% ny vola azon'ny orinasa ary 12.1% ny isam-bolany isaky ny seza azo raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Ny Primera Air koa dia nampiseho fahombiazana mahavariana momba ny fidiram-bola fanampiny izay nitombo 3.11%, nahatratra 9.36 tapitrisa euro ny vola azon'ny 2017 hatreto.
Ny fampidirana kilasy fandefasana telo amin'ny sidina eoropeanina, ny fampivoarana ireo zotra be mpitady indrindra ary ny fanesorana ireo sidina tsy mahasoa no anton-javatra lehibe indrindra mamela ny Primera Air hahatratra vokatra avo lenta amin'ity taona ity. Raha raisina ny zava-bitan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, Primera Air dia manohy manova ny sidina transatlantika avy any Eropa mankany Etazonia.
Nandritra ny valo volana voalohany tamin'ity taona ity, ny isan'ny mpandeha entin'ny Primera Air dia nitombo 23% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Araka ny vinavinan'ny orinasa dia mihoatra ny iray tapitrisa ny isan'ireo mpandeha entin'ny zotram-piaramanidina amin'ny faran'ny 2017.
Primera Air dia hanomboka hanidina any New York sy Boston avy amin'ny toby vaovao eropeana ao London, Paris ary Birmingham manomboka ny volana aprily 2018. Mandritra ny lohataona 2018, Primera Air dia hanomboka sidina avy any Riga mankany amin'ny toerana fialan-tsasatra malaza ihany koa - ny tanànan'i Malaga ao Faritra Costa del Sol any Espana.
"Faly izahay manambara ny fahombiazan'ny orinasam-piaramanidina tsara sy ny fitomboan'ny isan'ny mpandeha izay nentinay hatreto tamin'ny taona 2017. Ity, indrindra indrindra, dia midika fa ny hetsika rehetra natombokay tamin'ny taona 2016 dia manome vokatra lehibe. Nohatsarainay ny vokatray tamin'ny fampidirana kilasy saran-dàlana telo amin'ny sidina eoropeanina, nikatona ny làlana tsy mahasoa ary nifantoka tamin'ireo izay be fangatahana. Izahay dia nanatsara ny fampandehanan-draharaha mba hampitomboana ny entana entana ary mankafy vokatra mahatalanjona izahay izao; Nahatratra 87% ny salan'isan'ny salanisan'ny sidina Primera Air ”, hoy ny filoha lefitry ny Primera Air sady talen'ny birao Anastasija Višņakova.
Primera Air dia mpandraharaha voalamina, miasa sidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina mihoatra ny 70 any Eropa. Primera Air dia monina any Danemarka sy Latvia, ary ao amin'ny Primera Travel Group izay miasa maso ivoho sy orinasam-pizahan-tany any Suède, Danemark, Norvezy, Failandy, Islandy ary Estonia.
“Aza mandeha amin'ny seranam-piaramanidina”: mivalona ny Monarch Airlines any UK
IBM dia hanatrika ao amin'ny State of Caribbean Industrial of the Tourism Industry Conference